PSG Oo Weli doon Doonaysa Rooney | Wardoon Wardoon.net - Somali News
PSG Oo Weli doon Doonaysa Rooney
Kooxda PSG ee dalka Faransiiska ayaa lagu soo waramayaa inay indhaha ku hayso sidii ay ula saxiixan lahayd weeraryahanka Manchester utd Wayne Rooney.
PSG ayaa doonayso inay lasoo wareegto Wayne Rooney kadib markii ay weysay qorshe ay kula wareegi lahayd xidiga garabka kooxda Real Madrid Angel Di Maria kaas oo sababaha xayiraadda dhaqaale ay u diiday PSG inay iibsato.
Guddoomiyaha PSG Nasser Al Khelaifi ayaa shaaca ka qaaday in kooxda PSG ay go’aansatay inay ka hartay xiisaha ay u qabtay Angel Di Maria islamarkaasna ay diyaar u yihiin in dalab u diraan weeraryahanka wadanka ingiriiska Wayne Rooney.
Saxafiga Laurent Perrin oo wax ku qora wargayska La Parisien ayaa sheegay in PSG maamulkeeda sare ay dood ka yeesheen sidii ay dalab ugu diri lahaayeen Wayne Rooney kadib markii ay waayeen Angel Di Maria.
Tababare Louis Van Gaal ma doonayo inuu waayo Wayne Rooney kaas oo loo arko inuu yahay kabtanka cusub kooxda Manchester utd.